Indawo yokudlala iMetalco → Izakhiwo Ezincane Zasemadolobheni • Umkhiqizi • Umsabalalisi
Isimanje inkundla yokudlala ivumela ubumnandi obungavinjelwe futhi obuphephile emoyeni ovulekile hhayi kuphela ezinganeni zabo bonke ubudala, kodwa nakwabasha.
Ukuzijabulisa jika futhi wonke amadivayisi abekwe ebaleni lokudlala, ikakhulukazi lapho ebanjelwe enkampanini yabalingani, kuyindlela enhle yokusebenzisa isikhathi samahhala, futhi ngasikhathi sinye isekela ukukhula kwengqondo nomzimba komuntu omusha.
Izinkundla zokudlala zezingane asihlangani ezikoleni nasezinkulisa kuphela, kepha nasemapaki nasezivandeni zasekhaya, ngoba kwaziwa isikhathi eside ukuthi ukudlala nontanga emoyeni ovulekile kuvumela ukukhula okungcono kwezenhlalo nezimoto kwengane, kuthuthukisa ubuhlakani bayo futhi kulolonge ubukhazikhazi.
Bheka futhi: Ipaki, amadolobha namabhentshi engadi
Lapho kuklanywa izindawo zokudlala zabakhiqizi Kodwa-ke, kufanele ingakhathaleli nje kuphela okokusebenza okukhangayo futhi okumibalabala, kepha futhi nokuthembeka kwamadivayisi. Kungakho kubaluleke kangaka ukukhetha indawo lapho izingane zidlala khona, kungaba yipaki yedolobha noma ingadi yasekhaya. izinkundla zokudlala eziqinisekisiwe.
Bheka futhi: Isithuthuthu sebhayisekili - izinhlobo nezinzuzo
Ingadi izindawo zokudlala Izinkampani zakwa-Metalco zikuvumela ukuthi udlale ngaphandle ngokuphepha ngenxa yemishini ethokozisayo futhi esebenzayo edala le nkundla yokudlala. Lezi yizo zonke izinhlobo zokushintshela ezihloselwe umuntu oyedwa noma ngaphezulu, izitebhisi, kwesinye isikhathi imijikelezo yokuzijabulisa, amaslayidi kanye nanoma iyiphi into ekhuphukayo.
Indawo yokudlala yaseJardin kufanele iqinisekise ukuphepha kokudlala kuwo wonke lawa madivayisi, okumele aguqulelwe kubudala namakhono omzimba wabasebenzisi.
Amadivayisi namathoyizi enzelwe izingane ezincane kunazo zonke mancane, anemibala futhi akhwezwe kancane ukwenza kube lula ukusetshenziswa kwawo futhi aqinisekise ukuphepha, ngisho nasezinganeni ezingakhubazekile kangako. Izinkundla zokudlala zensimu, lapho izingane ezindala zidlala khona, zinikeza imizwa eminingi futhi ziqinisekisa ubumnandi obukhulu kumadivayisi ayinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Kubasebenzisi abakhulu impela, izinga lobunzima selivele liphakeme kakhulu, ukuze abantu abasha bangagcini nje ngokwenza ubukhali, kepha futhi bathuthukise amandla nokukhuthazela.
Izinkundla zokudlala zezingane ahlelwe engadini, avame ukucebiswa ngokulinganisa nezindlu zokudlala ezibekwe endaweni ephakeme. Ngaphezu kwayo yonke into yokudlala, kufanele futhi ukhumbule ngendawo ephephile ezomunca ukuwa okungenzeka. Lapho uhlela inkundla yokudlala, kuhle futhi ukunakekela indawo lapho ungabeka khona izihlalo netafula ukuze izingane zidle ngenkathi zidlala noma ziphumule emthunzini.
Imishini yokudlala eyenzelwe nguMetco, umholi womhlaba izakhiwo ezincane Zibonakala ngokwakhiwa kwanamuhla nokuma kwe-ergonomic, kanye nemibala ethokozisayo nokuqina okwanele, okuqinisekisa ukudlala okumnandi nokuphephile.
Lapho kuklanywa izindawo zokudlala zabakhiqizi zezingane kumele ibheke iminyaka yezingane eyakhele indawo yokudlala futhi yakhe indawo yabazali noma ababheki ababheka izingane ngesikhathi sokudlala.
Ukuhlela ukusebenza inkundla yokudlala engadini ingakwazi ukufaka amadivayisi angahloselwe izingane nentsha kuphela, kepha futhi nabantu abadala nabadala abasebenzayo. Endaweni enjalo, ilunga ngalinye lomndeni lingazitholela okuthile futhi lingagcini nje ngokuzijabulisa, kepha futhi linakekele impilo yabo nesimo somzimba, futhi konke lokhu kungenziwa ngaphandle nasenkampanini yabathandekayo babo.
Amadivayisi aklanywe yi-Metalco, adala izinkundla zokudlala, zenziwe nge-aluminium nepulasitiki enemibala. Inhlanganisela enjalo ethokozisayo nentsha yezinto ikuvumela ukuthi udale ubujamo obuyinkimbinkimbi bezakhiwo ezihloselwe ukudlala. Indawo yokudlala yensimu ivumela wonke umndeni ukuthi uzijabulise, ngoba hhayi izingane kuphela, kepha nabantu abadala, banentshisekelo yokubamba iqhaza emidlalweni yangaphandle.
Kufanele kukhunjulwe futhi ukuthi inkundla yokudlala kufanele iqinisekise ukuphepha kwezingane ezidlala kuyo, ngakho-ke kufanele ukhethe inkundla yokudlala enesitifiketi.
Idizayini yenkundla yokudlala yensimu kufanele cabanga ngeminyaka yezingane ezidlala kuyo, ubume bendawo, ukukhanya kwelanga, ukubonakala kwezingane emafasiteleni endlu nendawo yokuphepha yawo wonke amadivayisi enkundleni yokudlala. Ngaphezu kwamadivayisi aqinile, indawo ephephile emunca ukuwa nayo ibalulekile.
Isimanje inkundla yokudlala engadini kungukutshalwa kwezimali okungavumeli kuphela ingane ukuthi ijabule kakhulu, kepha futhi kukhulisa ukuqina komzimba wayo, ngakho-ke kubalulekile ukuthi inkundla yokudlala iqinisekise ukuphepha okuphezulu kwezingane ezidlala kuyo.
Ngakho-ke, kufanelekile ukukhetha umklami ofanele nomakhi wemishini ebekwe ebaleni lokudlala, ukuqinisekisa ukuhambisana namazinga asebenzayo ezempilo nokuphepha.
ibala lokudlala elifuthwayoinkundla yokudlala yamapulangwesingakanani isitifiketi sendawo yokudlalaingakanani inkundla yokudlalaungayakha kanjani inkundla yokudlalaungakha kanjani inkundla yokudlala yezinkuniuyenza kanjani inkundla yokudlalaungayenza kanjani inkundla yokudlala yezinganeinkundla yokudlalaumgandayo wenkundla yokudlalainkundla yokudlala engadiniinkundla yokudlalainkundla yokudlala yabantu abadalaindawo yokudlala yezinganeinkundla yokudlala yezingane iWarsawinkundla yokudlala engadiniinkundla yokudlala yamapulangweinkundla yokudlala yokhuni indlela yokwenzainkundla yokudlala eGdańskinkundla yokudlala GdyniaIndawo yokudlala yaseKatowiceIndawo yokudlala yaseKrakowinkundla yokudlala engadiniinkundla yokudlala ngesiNgisiinkundla yokudlala poznańumkhiqizi wenkundla yokudlaladesign ebaleni lokudlalaInkundla yokudlala yeSzczecininkundla yokudlala engadiniinkundla yokudlala iWarsawinkundla yokudlala Wrocławinkundla yokudlala ingcwatshiweizindawo zokudlalaizinkundla zokudlala zabasabalalisiinkundla yokudlala amanzi